MacBookPro na friza | Martech Zone
Wednesday, May 2, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
I nụrụ ya nke ọma! Anọ m na-enwe nsogbu na MacBookPro na nso nso a ebe m na-enweghị ike ịmalitegharịa ya. Ọ na-anọdụ ala ebe ahụ ma ghara ime ihe ọ bụla. Ọ bụ nnọọ ihe nkoropụ. Amalitere m iche na ọ nwere ike ịbụ ihe gbasara thermostat ya mere m mere ule - m tinyere ya na friza m. 10 nkeji mgbe e mesịrị m wepụtara ya na ọ malitere ozugbo right nsogbu adịghị.
M nwalere ya n'ụzọ a ugboro ole na ole ma gosi na nke ahụ bụ nsogbu. Ọ nwere onye ọ bụla nwere nsogbu a? Ọrụ m nyere iwu nke ọhụrụ ma m gbalịrị ịnyefe faịlụ m n'abalị ụnyaahụ (ọ bụ ya mere na ị hụghị ọkwa) mana enweghị m ike ịme ya ka ọ rụọ ọrụ. Ikwu okwu banyere ndakpọ olileanya!
Ya mere, taa, m ga - enweta aka n'aka onye ọrụ ike m, bụ Bill, iji hụ ma anyị nwere ike ịfefe faịlụ ndị ahụ ma nweta MacBookPro a na - arịa ọrịa na dọkịta.
Anaghị Apasa Ụgbọ
Mee 2, 2007 na 9: 14 AM
Ndo nụ na Doug, m wụnye usoro ofufe ofufe na Macbook m na nso nso a n'ihi na enweghị m mmasị ka m si ekpo ọkụ, enwere m ya ka ọ ghara ịhapụ onye ofufe ahụ ka ọ daa n'okpuru 3500rpm. Ọ na-abaghị uru na 1800rpm mana hapụ CPU ka ọ ruo ihe dị ka 65C tupu ọ malite ịmalite elu onye ofufe ahụ, nke ahụ yiri ka ọ dị oke elu, mana sọftụwia ahụ na-enye ohere. Echere m na akpọrọ ya smcFanControl. Mana echeghị m na ọ ga-edozi nsogbu gị 🙂
You nwekwara ike ibi na ngwa nju oyi na laptọọpụ? ngwa ngwa ị nweta biya?
Mee 2, 2007 na 10: 38 AM
Enyere m nke ahụ, m (ejiri m njikwa njikwa SMC) mana ọ nyeghị aka. The MacBookPro e n'ezie na-ekpo oke ọkụ… ya dị na-eche na mgbe ị na-amalite. Ọ bụrụhaala na anaghị m agbanyeghachi, ọ dị mma. 🙂
Mee 2, 2007 na 12: 04 PM
Doug, echere m na echiche niile banyere amaokwu Mac bụ igwe eji Windows arụ ọrụ ịkwesighi ịmalitegharị oge niile?
You hụrụ na ekwughị m amaokwu Mac PC? N'ihi gịnị? Ha abụọ bụ Kọmputa nke Onwe 🙂
Mee 2, 2007 na 12: 18 PM
Echere m na ị maara na ị nwere ike ịmalite Mac na ọnọdụ firewire site na ijide igodo T n'oge buut. Mfe nyefe faịlụ…
Mee 2, 2007 na 12: 48 PM
Eji m abalị niile na-anwa foo! Ọ ga-akwụsị na elekere 1 na nkeji 15 wee ghara ịga n'ihu. M tetara n'ụtụtụ a ma ọ ka dị na 1 hour na 15 nkeji! Ọchị!
Aga m anwa Mmepụta oyiri Carbon Osote!
Mee 3, 2007 na 2: 35 AM
Nke ahụ na-ada ihe fọrọ nke nta ka enwere nsogbu diski ike na akwụkwọ Mac gị.
Gbalịrị ịgba ọsọ Ukpo Akpu? Ezi mmemme ị nwere ma ọ bụrụ na ị nwere Mac (M na-echekarị ihe kpatara na Apple apụtabeghị ha…)
Ma chere - ị gbalaga Applejack ma - nke nwere ike ịchekwa ụbọchị, ma bụrụ freeware.
Jisie - ka ike dịrị gị.
Mee 2, 2007 na 11: 08 PM
Macs siri ike iji na ị gaghị akpali faịlụ site na otu ọzọ? Chaị. Nke ahụ amaghi!
Mee 3, 2007 na 7: 23 AM
Echeghị m na ha siri ike iji ma ọlị - mana ha anaghị arụ ọrụ nke ọma mgbe ha na-arịa ọrịa dị ka nke m! Ana m aga ụlọ ahịa Apple taa ka m hụ ihe ha nwere ike ịchọta.